6 months ago allbalcad
Waxaa maanta Magalaada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday madaxwyenihii hore ee Kenya, Daniel Toroitic Arap Moi oo Kenya soo maamulayay muddo 24 sano.
Xukunkii Moi waxaa aad loogu xusuuta afgembigii dhicisoobay ee uu ka badbaaday sanadkii 1982.
Inkastoo Maamulkii Moi uu gacan bir ah ku qabtay Kenya, haddana waxaa jiray rag ka tirsanaa milateriga oo isku dayay inay xilka ka turaan.
Jeneraal Maxamuud oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada lugta ayaase sabab u nqoday in Moi uu dalka Kenya maamulo 24 sano, kana badbaado qeyb ahaan isku day afgembi oo ay dhici kartay in ay noolashiisa galaafato.
Markii uu afgembiga dhacay, madaxweyne Moi waxaa uu ku sugnaa beer uu ku lahaa deegaanka Kaparnet oo uu Moi ka soo jeeda. Jeneraal Maxamuud ayaa markiiba waxaa uu tegay beertii uu ku sugnaa Madaxweyne Moi, waxaana uu ka dalbaday in uu u fasaxo sidii uu uga hortagi lahaa afgembiga.
Dadkii usoo joogay xilligaas waxay shegeen in Jeneraalka oo wata askar lagu qiyaasay 40 uu cagta mariyay askartii isku dayaysay afgembiga, waxaana uu markale xukunka kus oo celiyay madaxweyne Moi.
“Markii Moi xilka laga tuuray oo afgembiga uu dhacayay wuxuu ku sugnaa beertiisa, aad ayuu u khalkhalay, talana way ku ciirtay,balse markiiba waxaa usoo gurmaday oo arrinta soo farageliyay Jeneraal Maxamuud o ciidankii cirka ee arrinta ka dambeeyay fashiliyay”, sidaas waxaa BBC-da u sheegay Faarax Macallin oo xildhibaan ahaa xilligii madaxweyne Moi.
Faarax Macallin ayaa waxaa kale oo uu sheegay in wixii markaas ka dambeeyay Jeneraal Maxamuud madax looga dhigay ciidanka cirka, si uu dib u habeyn ugu sameeyo, waxaana uu madax ka ahaa afar sano.
Faarax Macallin ayaa sidoo kale sheegay in Jeneraal Maxamuud uu markiiba laayay ciidanka afgembiga sameeyay, wuxuuna idaacadda Qaranka ee VOK la oran jiray ku amray in weriyihii joogay uu dadka u sheego in afgembigii fashilmay, waxaana sidaas markale xukunka ula wareegay Jeneraal Maxamuud.
Xilligaas waxaa taliyaha ciidamada ee Kenya ahaa Jeneraal lagu magacaabi jiray Mulinge, balse markii uu afgembiga fashilmay waxaa uu madaxweyne Daniel Moi uu xilka taliyaha ciidamada sanadkii 1986 u magacaabay Jeneraal Maxamuud Maxamed Barow oo hayay tan iyo sanadkii 1996.
Wixii intaa ska dambeeyay Jeneraal Ma
xamuud waxaa lagu tilmaami jiray in uu ahaa ninkii ugu dhawaa madaxweyne Moi ee uu aad ugu kalsoonaa.
“Wixii afgembiga ka horeeyay Soomaalida dalka Kenya waxaa laga heystay fikir khaldan, balse afgembigii dhacay iyo sida Jeneraal uu uga falceliyay ayaa waxbadan ka badeshay sawirka laga heystay Soomaalida, shaqooyin badan ayaa la siiyay, hey’adaha dowladda oo aan markii hore loo oggoleyn ayaa madax looga dhigay, waxbadanna waa loo qabtay Soomaalida Kenya oo ay kamid tahay waxbarashada”, ayuu raaciyay Faarax Macallin.
Jeneraalka oo hawlgab ah ayaa haatan ku nool Magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, waxaana BBC-da ay isku dayday inay la xiriirto, balse nooma aysan suurtagelin in aan helno.
Cyrus jirongo oo ah xildhibaan hore, aadna ula soo shaqeeyay xisbigii madaxweyne Daniel Arap Moi ee Kanu ayaa BBC-da u sheegay in Jeneraal Maxamud uu kamid yahay dadka fara kutiriska ah ee badbaadiyay Kenya, sababna uu u yahay meesha ay Kenya maanta ay joogto.
Wuxuu sheegay in markii uu afgembiga dhacay Jeneraal uu ku sugnaa Magaalada Nakuru, balse saacado gudahod uu idaacadda Qaranka kala wareegay ciidanka afgembiga sameeyay.
“Dalkii oo jahwareersan ayuu Jeneraal Maxamud waxaa uu soo kaxeeyay madaxweyne Daniel Arap Moi, oo wuxuu horkeenay idaacadda Qaranka, wuxuuna la hadashiiyay shacabka, wuxuuna uu xaqiijiyay in Madaxweynaha uu nool yahay, dalkana uu ka taliyo, ciidankana ay isaga ka amar qaataan”, ayuu yiri Cyrus jirongo.
Siyaasigan ayaa sidoo kale sheegay in qofka Soomaaliga u maanta ka fursad wanaaagsan yahay wixii ka horeeyay afgembiga, suurtagaln ay tahay in qof Soomaali uu madaxweyne ka nqodo Kenya, maadaama sumcad wanaagsan loo hayo Soomaalida Kenya, arrintaasina uu sabab u yahay Jeneraal Maxamuud.
“Maxamuud waxaa uu badelay fikirkii qaldanaa ee laga heystay Soomaalida, waxaa uu sare u qaaday kalsoonida lagu qabo Soomaalida, waxayna taas keentay in si dhab ah loo aqoonsado jiritaanka dadka Somaalida ee Kenya, waana geesi badbaadiyay Kenya, waligiina la xusi doona”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Jeneraal Maxamuud ayaa waxaa uu lasoo shaqeeyay gumeystihii Ingiriiska sanadkii 1953, waxaana uu xilligaas madax kasoo noqday taliyaha ciidamada lugta ee Kenya, kadib markii Kenya ay xornimada qaadatay.
Previous Dowladda oo faah faahisey xaalada Somalida ku nool Shiinaha (Coronavirus)
Next Madaxweyne Waare oo Lakulmay Wafdi Kasocda Qaramada Midoobey